လေနုအေး: Debate vs Quarrel
Debate vs Quarrel
ခုတလော facebook ကြည့်လိုက်ရင် live အပြန်အလှန်တိုက်ပွဲတွေ ဟိုက ဒီက share ကြတာ တွေ့ ရတယ်... သားနဲ့ အခန်းထဲမှာ နားနေတုန်း ဘာတွေလဲဆို ဖွင့်ကြည့်လိုက်တော့ ဘာမှန်းတောင်မသိသေး ညစ်ညမ်းတဲ့အဆဲတွေ ဆက်တိုက်ကြားရတော့ သားက လှမ်းမေးတယ်... ဘာတွေလဲမေမေတဲ့... အမြန်ဆုံးပိတ်လိုက်ရတယ်... အယူအဆတွေ ကွဲလွဲလို့ ရပါတယ်... အတွေးအခေါ်တွေကွဲလွဲလို့ ရပါတယ်... ကိုယ့်အယူအဆ, အတွေးအခေါ်ကို သူများကလက်ခံစေချင်ရင် လက်ခံနိုင်ဖို့ ပြောတတ်အောင်လေ့ကျင့်ပါ... ဆဲခြင်းဘာသာဗေဒနဲ့ ပြောရင် လက်မခံတဲ့အပြင် အရင်က ကိုယ့်လက်ခံတဲ့သူတွေတောင် လက်မခံတဲ့အခြေအနေဖြစ်သွားတတ်ပါတယ်... ဆဲမှ အနိုင်ရတာ မဟုတ်ပါဘူး... ကိုယ်ပြောချင်တဲ့အချက်ကို အသေအချာထိထိမိမိသူများလက်ခံလာအောင် ပြောတတ်မှ ပညာပါ...
ကျွန်မကိုယ်တွေ့ အဖြစ်အပျက်လေးပြောပြရရင် ကျွန်မငယ်ငယ်က ရပ်ကွက်ထဲမှာ အရမ်းကစားချင်ဆော့ချင်တယ်... စည်းကမ်းကြီးတဲ့မိဘတွေက တချို့ ကလေးတွေဆဲသံကြားရတော့ ခွင့်မပြုဘူး... အဆော့အကစားသန်တဲ့ကျွန်မ အတင်းပူဆာတော့ မေမေက ကတိတခုတောင်းတယ်... သူများဆီက အဆဲတွေကူးမလာပါဘူးဆို ကစားတဲ့... မေမေ့ကို ကတိပေးခဲ့တယ်... တကယ်သွားဆော့တော့ ကစားလို့ ရှုံးရင် အဆဲနဲ့ အနိုင်ယူကြတယ်, အဆဲနဲ့ ငြင်းခုန်ကြတယ်... အဲဒီမှာ မဟုတ်မခံကျွန်မက ကိုယ်လဲမှန်နေပါလျက် နေရင်းထိုင်ရင်း အဆဲချည်းခံနေရတော့ စဉ်းစားတယ်, ဘယ်လိုအထိရောက်ဆုံးနည်းနဲ့တုန့် ပြန်မလဲ... ကစားပွဲမှာ ကိုယ်ကနိုင်နေပါလျက်နဲ့အဆဲခံထိ မစိုးလို့အရှုံးပေးပါတယ်လို့ပြောလိုက်ရတာကို ကလေးပီပီမခံချင်... ဒီမှာ အဆဲမပါပဲ, ရိုင်းစိုင်းတဲ့စကားလုံးမပါပဲ ကိုယ်မှန်တယ်ဆိုတာကို ချက်ကျလက်ကျ, ရဲရဲဝံ့ဝံ့ပြောတတ်အောင်ကြိုးစားခဲ့တယ်... အဆဲမပါပဲ ကျွန်မငယ်ဘဝရပ်တည်နိုင်ခဲ့တယ်... နောက်ပိုင်း ကျွန်မနဲ့ကစားရင်း ဆဲရမှာတောင် သူတို့ ဝန်လေးလာတယ်... သဘာဝတရားကိုက ဆိုးတာနဲ့ ကောင်းတာ ကောင်းတာကို ပိုလုပ်ချင်ကြတာပါ...
မနှစ်က ကျွန်မ ဧရာဝတီတိုင်း ဒါးက, ဝက်ထိုးနဲ့ ပုသိမ်က ကလေးတွေအတွက် educational event လေးလုပ်ခဲ့တဲ့အခါ debate program လေးထည့်ခဲ့တယ်... အရမ်းအားရစရာကောင်းပါတယ်... ခေါင်းစဉ်က "အလွတ်ကျက်သင့်, မကျက်သင့်"တဲ့... ကလေးတွေ debate concept ကိုနားလည်ကြတယ်... ကိုယ်ယုံကြည်ရာကို အချက်အလက်ပြည့်ပြည့်စုံစုံနဲ့သေချာ ပြောနိုင်ကြတယ်... ဒေါသမပါဘူး... အရမ်းအားရစရာကောင်းပါတယ်...
ကျွန်မ ရေးခဲ့ဖူးတဲ့ Debate vs. Quarrel ဆိုတဲ့စာလေးပြန်တင်ပေးလိုက်ပါတယ်... ကိုယ့်ယုံကြည်ချက်, ရပ်တည်ရာကို ယဉ်ကျေးစွာရပ်တည်နိုင်ကြပါစေ...
Debate vs. Quarrel
ပုဂံနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကျွန်မတို့ နိုင်ငံရဲ့ အရင်က အတော့်ကိုနာမည်ကြီးတဲ့ အာဏာရှင်တယောက်နဲ့အင်တာဗျူးကို ကြည့်မိတော့ မနေ့ က သားနဲ့ကားပေါ်မှာ ဆွေးနွေးဖြစ်တာလေး သွားသတိရတယ်...
"မေမေ... တကယ်ဆို အင်္ဂလိပ်က မြန်မာပြည်ကို သိမ်းပိုက်လိုက်တာ အရမ်းကောင်းတာနော်" တဲ့... သားစကားကို စိတ်ဝင်စားသွားတာကြောင့် ဘာလို့ လဲလို့ မေးတော့ သားကပြန်ဖြေပါတယ်... "ဘုရင်စနစ်က အာဏာရှင်စနစ်... ဘုရင်သေရင် ဘုရင့်သားက smart မဖြစ်လဲ ဘုရင်ပြန်ဖြစ်တယ်လေ... တကယ်လို့အင်္ဂလိပ်မသိမ်းခဲ့ရင် ဘုရင်စနစ်ဆက်ရှိနေမှာပေါ့" တဲ့... ကျွန်မပြန်ဖြေပါတယ်... အင်္ဂလိပ်မသိမ်းလဲ ကိုယ့်ဘာသာဖြုတ်ချလို့ ရမှာပေါ့သားရဲ့... သိမ်းပိုက်တဲ့စနစ်ကလဲအရင်းရှင်ကိုလိုနီစနစ်ပဲလေဆိုတော့... သားက ကျွန်မအရမ်းသဘောကျတဲ့အဖြေတခုပြန်ဖြေပါတယ်..."sudden change ဘယ်ဟုတ်ပါ့မလဲမေမေတဲ့... ဖွားဖွားစုအုပ်ချူပ်နိုင်ဖို့အကြာကြီးအချိန်ယူခဲ့ရတယ်မိုလား"တဲ့... ကျွန်မသဘောကျမိတယ်ဆိုတာ သားရဲ့logical thinking လေးကိုပါ... ဘုရင်ရဲ့တသွေးတသံတမိန့် စနစ်ဆိုးကို ကြောက်ရွံ့ ပြီး အပြောင်းအလဲprocess ကြာမယ်လို့ သူတွေးလိုက်တာ... "ဖွားဖွားစုလို အကြောက်တရားကင်းအောင် လူတွေကို inspire လုပ်ပေးနိုင်မယ့်ခေါင်းဆောင်ရှိရင် အာဏာရှင်စနစ်ဆိုတာ ပြိုလဲမှာပါပဲသားရယ်" လို့ကျွန်မဖြေခဲ့တယ်...
ကျွန်မပထမအစမှာ ပြောခဲ့တဲ့ အင်တာဗျူးကို ကျွန်မက အာဏာရှင်ဟောင်းကြီးနဲ့အင်တာဗျုးတဲ့ညီမလေး ဦးနှောက်စီးချင်းထိုးပွဲလို့မြင်မိတယ်... ပုဂံဘုရားတွေကို ပြုပြင်သင့်မပြုပြင်သင့် ဆွေးနွေးကြတယ်... အာဏာရှင်ဟောင်းကြီးက ပြုပြင်သင့်တယ်ဆိုတဲ့ဘက်က... အင်တာဗျူးတဲ့ညီမလေးက မပြုပြင်သင့်ဘူးဆိုတဲ့သူတွေကိုယ်စား သဘောကိုမေးတာပါ... အာဏာရှင်က debateနဲ့ စတာပါ... ဒါပေမယ့် ညီမလေးရဲ့မေးခွန်းတွေကို သူdebate ပြန်မလုပ်နိုင်တော့ ဒေါသပါလာတယ်... တကယ်ဆို သူ့ မှာ debate လုပ်နိုင်တဲ့ ability သာရှိရင် သူတည်ငြိမ်စွာနဲ့တုန့် ပြန်ပြီး အရမ်းလှတဲ့ အင်တာဗျူးလေးဖြစ်လာမှာပါ... အဆုံးမှာတော့ အာဏာရှင်ကြီးက ဉာဏ်ပညာမပါတဲ့ quarrel ရန်ထောင်ခြင်းနဲ့အဆုံးသတ်သွားတယ်... အသက်ငယ်ပေမယ့် အကြောက်တရားကင်းစွာ အင်တာဗျူးဆုံးတဲ့အထိ တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်မေးသွားတဲ့ ညီမလေးကို ချီးကျူးမိတယ်...
ကျွန်မဇွန်လက မော်လမြိုင်နည်းပညာတက္ကသိုလ်ကို educational event လေးသွားခဲ့တော ကျွန်မတို့ ရဲ့စီနီယာကြီးအန်ကယ်ဦးဝင်းထိန်ဦး ကလေးတွေဆရာတွေကိုမေးခဲ့တဲ့ မေးခွန်းလေး သွားသတိရတယ်... ကျပန်းစကားပြောပွဲတို့စကားရည်လုပွဲတို့ အတွေ့ အကြုံရှိလားတဲ့... ကလေးတွေမှာ အဲဒီအခွင့်မရှိခဲ့ပါဘူး... တကယ်တော့ရှိသင့်ပါတယ်... အာဏာရှင်ခေတ်မှာ မပြောရဲမဆိုရဲအောင် ပါးစပ်တွေအပိတ်ခံခဲ့ရတော့ အဲဒီကောင်းတဲ့ အလေ့အကျင့်လေးတွေ ပျောက်ကုန်တာပါ... တကယ်တော့ ပြဿနာတခုကို အဖြေရှာကြတဲ့အခါ debate နည်းကို သုံးမှ အကောင်းဆုံးအဖြေရမှာပါ... Quarrel ဘက်ရောက်သွားရင်တော့ မတရားအနိုင်ရဖို့အပြင်းထန်ဆုံးစကားလုံးတွေ...အရိုင်းဆုံးစကားလုံးတွေသုံးနှုန်းပြီး ကိုယ်အနိုင်ရဖို့ လူတဘက်သားကို ချိုးနှိမ်ပြောဆိုတဲ့ personal attack အသွင်ပြောင်းပြီး နဂိုဆွေးနွေးတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ပျောက်ကုန်တာအမှန်ပါ... ခုနကျွန်မပြောပြတဲ့ အင်တာဗျုးခံရတဲ့ အာဏာရှင်ကြီးလိုလေ...
ကျွန်မတို့ တိုးတက်ခေတ်မှီတဲ့ခေတ်ကြီးမှာ လူဖြစ်နေကြတဲ့အခါ ကိုယ့်အမြင်ကိုယ့်အတွေးကို ဦးနှောက်ဉာဏ်ပညာသုံးပြီး အဆင့်အတန်းရှိစွာ တုန့် ပြန်တတ်ဖို့ အရေးကြီးပါတယ်... Physical ကိုအားကိုးတုန့် ပြန်သတ်ကြတယ်ဆိုတာ ခုခေတ်မှာ ရာဇဝတ်မှုဆိုတဲ့ဥပဒေနဲ့တားမြစ်ထားပါပြီ... ကိုယ်အနိုင်ရချင်ဇောနဲ့ လူတဘက်သား ဂုဏ်သိက္ခာကို ထိပါးပြောဆိုတာကိုလဲ အသရေဖျက်မှုဆိုတဲ့ ဥပဒေနဲ့ တားမြစ်ထားတဲ့ခေတ်မှာ quarrel နဲ့personal attack ဆိုတာ လုပ်တဲ့သူတွေ ရှက်စရာကောင်းတာ အမှန်ပါပဲ...
အကောင်းဆုံးဥပမာပြရရင် ကျွန်မတို့တိုင်းပြည်အမေအမေစုဆိုရင် world media မှာ နာမည်ကြီး interviewer တွေတောင် လက်ဖျားခါအောင် ဖြတ်ထိုးဉာဏ်ကောင်းလွန်းပြီး အဖြေတိုင်းကို အကောင်းမွန်ဆုံးနဲ့အဆင့်အတန်းအရှိဆုံးဖြေဆိုနိုင်သူပါ... အမေဘယ်တော့မှ သူတပါးကို တိုက်ခိုက်ဖြေဆိုတာမျိုးမရှိခဲ့ပါဘူး...
တိုးတက်တဲ့တိုင်းပြည်တွေမှာ debate association, debate competition တွေနဲ့မျိုးဆက်သစ်တွေကို proper debate လုပ်နိုင်အောင် ပြုစုပျိုးထောင်ကြပါတယ်... ကျွန်မတို့တိုင်းပြည်ကြီး ရွေ့ နေပါပြီ... အကူးအပြောင်းကာလမှာ နိုင်ငံတကာက စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေလဲ အာရုံစူးစိုက်လာကြပြီ... ရင်းနှီးမြှပ်နှံလာကြပါပြီ... ကျွန်မတို့ မြန်မာပြည်ဟာဖော်ရွေရင်းနှီးတတ်တဲ့ နှလုံးရည်မြင့်မားတဲ့သူတွေနေထိုင်ကြတာပါ... ဒီတော့ စကားအပြောအဆိုမှာလဲ နိုင်ငံတကာနဲ့ရင်ဘောင်တန်းနိုင်အောင် ဆဲရေးတိုင်းထွှာခြင်း, သူတပါးကိုယ်ရေးကိုယ်တာထိခိုက်ခြင်းတွေ ရှောင်ရှားပြီး အဆင့်အတန်းရှိစွာနဲ့ပြောဆိုကျင့်ကြံနေထိုင်ကြပါစို့ လို့တိုက်တွန်းပါရစေရှင်...
(စာကြွင်း : ကျွန်မအဖေရဲ့ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအလုပ်က ရှေ့ နေပါ... သူ့ ဝါသနာနဲ့ သူ့ personality ပါကိုက်လွန်းလို့ သူရွေးခြယ်ခဲ့ပြီး ခုအသက်၇၀ကျော်တဲ့အထိ မြတ်မြတ်နိုးနိုးလုပ်နေတုန်းပါ... ကျွန်မက အဖေသွေးပါတယ်လို့ ဆိုရပါမယ်... Debate လုပ်ရတာကို နှစ်ခြိုက်ပါတယ်... ဒါပေမယ့် တဘက်က ရန်ဖြစ်တဲ့အသွင်ဆောင်သွားရင် ကျွန်မဆက်ဖြစ်လေ့မရှိပါဘူး... ကျွန်မရည်ရွယ်ချက်အပျောက်မခံနိုင်လို့ ပါ... ရန်ဖြစ်ခြင်းဖြင့်အနိင်ယူခြင်းကို အနိုင်လို့ ကျွန်မမသတ်မှတ်ပါဘူး... Abuse လို့ ပဲသတ်မှတ်ပါတယ်)
Posted by တန်ခူး at 4:40 PM